SYNGONIUM: DARYEELKA GURIGA, SAWIRADA IYO NOOCYADA CAADIGA AH - SOOSAARKA DALAGGA
Singonium Flower Amazing: siraha daryeelka guriga iyo sawirkiisa
Syngonium Waxay ka tirsan tahay qoyska Aroids. In dabiiciga ah, waxaad ka heli kartaa soddon of noocyo, iyo xaaladaha gudaha ah waa caado ah si ay u koraan oo kaliya laba ama saddex noocyada.
Waxaad baran doontaa dhammaan wixii ku saabsan Singonium mar dambe maqaalka.
Ubax dheraad ah Syngonium Iyagu waa dad caajis ah oo dhoobo leh oo ka yimaada xididdada hawadu koraan, oo awood u leh in ay taageeraan. Wixii dhirta dhalinyarada waxaa lagu gartaa joogitaanka caleemo-qaabeeya oo dhan oo midabka dhalaalaya, taas oo noqon karta labadaba lakulanka iyo monophonic. Marmarka qaarkood caleemaha waxaa lagu daboolaa xariijimo lacageed, dhibco iyo stroke. Midabkoodu waa kala duwan yahay midabyo kala duwan oo cagaaran ah oo cagaaran.
Marka ay sii weynaadaan, caleemaha syngonium waxaa lagu kala saari karaa dhowr xabbadood, tiradaa way kala duwanaan kartaa saddex ilaa toddoba.
Ubaxyada dhirtaas waa caleenta cagaaran oo leh guduud casaan ama casaan ah oo u ekaa ilmagaleen. Laakiin at home singonium guriga marna waligood ma blooms.
MUHIIM! Insgonium waa miir caano, taas oo ah sun. Haddii ay ku dhacdo xuubka xuubka, waxay keentaa xanaaq. Sidaa daraadeed, warshadani waa in lagu hayaa meel aan gaarin xayawaan iyo carruur yaryar.
Fiiri hoosta: sawirro ubax sawir leh oo ku habboon daryeelka guriga
Dabeecadda, singonium waxaa laga heli karaa kaymaha kulaylaha ee ku yaalla gobollada koonfurta iyo bartamaha Maraykanka, iyo sidoo kale Cuba iyo Jamaica. Geedka canabkani waa kan ugu dhow ee ehelka ah.
Feejignow on xubnaha kale ee Liana genus. Tusaale ahaan, Hoya Karnoza, mid ka mid ah kuwa ugu jecel badan by, waa warshad guri, liana quruxsan leh caleemaha la qurxiyey waa Rafidophora, iyo dufanka Fatshedera liana.
Aan aragno faahfaahin dheeri ah: noocyada syngonium leh sawirro
Liistada liiska syngonium - Tani waa geed canab ah oo geed leh oo leh stem khafiif ah. Dalkiisa hooyo waa Central America. Warshadani waxay noqotay awoowraadka noocyo kala duwan oo ah syngonium gudaha ah. Caleemooyinkeeda waxay ku yaalliin petioles oo aad u sarreeya, oo loogu magac daray magaciisa.
Dhalinyarada, dhirta waxaa lagu gartaa caleemo cagaaran oo cagaaran ah, waqti ka dibna waxay noqotaa mid fudud oo la kala furfuro. Sannad sannad ayaa dhirtaas ku daraysa dhererka shan iyo lixdan centimitir.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah syngonium mindi ah:
"Arrow" - aan qabin ee daryeelka ee ubax kala duwan oo si dhaqso ah u koraa
"Pixie" - ubax cufan leh caleemo kala duwan
"White Butterfly" waa koboc dhaqso leh oo leh caleemo waaweyn oo gaari karo mitir iyo badh.
Warshadu ma aha mid si gaar ah u dalbata oo awood u leh dhalmada sannadka oo idil.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa syngonium ka baxsan. Waxaa lagu gartaa laamood oo dheer, dhumucdiisuna waa labo sentimitir. Duufaantu waxay sameysmaan xididdada hawadu waxay dhacdaa.
Sannadkan, dhirtaasi waxay kor u qaadi kartaa dhererka illaa toddobaatan ilaa sagaashan mitir, iyo dhererkoodu waa boqol iyo siddeed sirimitir.
Caleemaha ee Syngonium-ka qaabaysan ayaa ah mid aad u cagaaran oo cagaaran. Iyadoo da'da, waxay bedelaan qaabkooda. Dhalinyarada geedka, waxay u eg yihiin fallaaraha, ka dibna waxay bilaabaan inay kala tagaan saddex ama shan qaybood. Saldhigga caleemaha waxaa lagu qalabeeyaa labo qaybood oo isku mid ah dhegaha.
Daryeelka Singonium ee guriga ayaa u baahan khaas ah. Haddii aad go'aansato inaad ku bilowdo syngonium guriga, u iibso kaliya meelaha la xaqiijiyay. Iibsiga dhirta ee gacmahaaga, waxaad halis u tahay inaadan helin noocyada iyo noocyada kala duwan ee aad jeceshahay.
Markuu guriga keeno guriga syngonium, isla markiiba go'aaminta booska meelaynta. Waxa ugu fiican oo dhan, haddii ay tahay miiska qolka qolka. Ha ilaawin inaad gashato taageerada gaarka ah ee warshadda.
Doorka taageerada waxaa sidoo kale lagu ciyaari karaa dhirta sida ficus, dieffenbachia ama aglaonema. The syngonium waxay ula dhaqmi doonaan iyaga si aad u saaxiibtinimo waxayna abuuri karaan qaab wanaagsan oo leh iyaga. Waxaad sidoo kale kori kartaa syngonium sida geedka ba'an, adigoo ku dhejinaya dheriyo.
Dhar la leh wakiilkan ee floraha lama gelin karo:
Qalabka korontada ku shaqeeya nidaamka kuleyliyaha dhexe.
Qolal leh hawo qalalan.
Guntinta (samaynta dhajinta)
Si aad u siiso dhirta qaab aad u qoto dheer, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u jarto. Waa jiido caleemaha cirridka ah ka dib markii caleen lixaad ama toddobaad ah.
MUHIIM! Dharsheynta waa in lagu sameeyaa gacmo gashi!
Wixii waraabiyo ubaxkan waa inuu qaataa biyo jilicsan, taas oo waa inay istaagaan saddex ilaa shan maalmood. In xilli diiran, waraabinta waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib markii kor-mareenka ka soo baxayaa, iyo ku buufinta caleemaha waxaa la samayn karaa maalin kasta.
MUHIIM! U hubso inaad ku shubtid biyaha xad-dhaafka ah ee saxanka dhejiska, oo aan u ogolaaneynin inay istaagto.
Xilliga qaboobaha, waxaa lagula talinayaa in lagu dhajiyo syngonium dhawr maalmood ka dib heerka sare ee ciidda dhoobada dheriga.
Si aad u beertid caanahaan, waxaad dooran kartaa dheri kasta laakiin waxaa lagugula talinayaa in aan ku beeri bonsainist, kaas oo ballaadhan ka weyn yahay moolka. Miisaanka dheriga waa inuu u dhigmaa xajmiga nidaamka xididka.
Warshadu waxay dareemeysaa weyn in ciidda nafaqada iftiinka leh. Haddii aad rabto inaad dhirta syngonium ku sameysid substrate culus, ku dar gambaleelka ama perlite halkaas, taas oo ku dari doonta iftiinka dhulka.
Haddii aad iibsatay syngonium dukaanka, isku day. ku tallaal dheri cusub toddoba maalmood. Warshad dhalinyaro ah ayaa loo baahan yahay in la duubo isla markiiba ka dib markii ay qaadatay dheriga dheriga. Mar dambe qalliinka geedka mid kasta oo ka mid ah bilaha guga labadii sanoba mar.
Waxaad samayn kartaa qalab ciid ah si aad isu bedesho syngonium naftaada. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa xaashi iyo ciid ballaaran, ciid iyo peat. Dhamaan waxyaabahan waa in lagu daraa qaybo isku mid ah iyo fluff. Dheriga, dhulku waa inuu ahaado mid aan la wadaagin.
Si ubax aad u qurux badan u noqoto, waxay u baahan doontaa taageero. Si aad u bilowdo, ku dhaji dheriga dufanka hoose, oo ku dar saddex daloolow hal ciid ah. Ka dib markaa, ku dheji taageerada bartamaha dheriga kuna adkee. Ku dhaji dhirta meel u dhow, isku dheji xididada oo dheriga intiisa kale ka buuxi dheriga. Kadib transplanting, isla markiiba biyaha ubax, laakiin ha u bacrin ugu yaraan laba toddobaad.
Haddii aad go'aansato inaad koritaanka miraha ka soo baxdo abuur, waa in marka hore ay ku qoyaan biyo diiran laba iyo toban saacadood. Markaas waxaa lagu beeray isku dar ah laba qaybood iyo qaybo kala duwan oo adag ah, qayb ka mid ah humus, hal qayb oo ah peat iyo hal qayb oo ciid ah. Si ay abuurka u koraan, heerkulka qolka meesha weelka ay la socdaan ay ku taal waa inay ahaataa heerka heerkulka shan iyo labaatanka heer kulka.
Waa in la ogaadaa in beerista syngonium laga bilaabo abuurka waa geedi socod adag, taas oo ka fog mar walba lagu guulaysto guul.
Kala saarista Syngonium waxay sameeyeen guntinta ledhka iyo caleemaha ciladaha.
Ku dhalida by gooyn Waxay ka kooban tahay in la gooyo astaamaha qaybaha kaas oo ay ku jiraan laba ama saddex numbarada internode. Qeybta kore ee gooyuhu waa budo leh dhuxul la jajabiyey ama ash.
Gooynta waxaa lagu dhejiyaa weel ka buuxsamaysa biyaha si ay u sameeyaan xididdada hawada. Si aad u ilaaliso heerarka ugu wanaagsan ee qoyaanka, waxaad ku dabooli kartaa cinwaanka. Ha iloobin hawo galka laba ama saddex jeer maalintii. Ka dib markii xididdada ka muuqdaan, ku beeri gooyn ee ciidda diyaarisay.
Wixii dhalmo ah ee caleemaha apgoryum syngonium waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dusha sare ee caleemaha hoosteeda shabakada internode si uu ugu jiro laba ama saddex xididood oo dheeraad ah. Ku rid baxsiga biyaha dejiya oo ha ilaawin inaad maalin kasta beddesho. Marka xididdada yaryar ay muuqdaan oo ay koraan ugu yaraan saddex sentimitir, waa in la dhexgeliyaa dheriga buuxa ee ciidda guud ee ubaxa gudaha.
DAREEN! Si kor loogu qaado geedi-socodka dhalidda syngonium, waa in ay ku dhacdo heerkul ah labaatan iyo saddex heerka korka eber.
Marka geedka uu ku jiro xilli sii kordhaya, heerkulka ugu fiicani waa siddeed iyo toban ilaa afar iyo labaatan heerka Celsius. Xilliga jiilaalka, waa in lagu hayaa qol qabow, heerkulka taas oo ah heerka lix iyo toban iyo siddeed iyo toban heerka Celsius.
Haddii aad go'aansatid in aad dhejisid dheriga laynka ah ee windowsill ah, waa inuu ahaado daaqada bari, galbeed ama daaqada waqooyiga. Daaqada koonfureed, dhirta waxay noqon doontaa mid xun, maadaama aysan jeclayn qoraxda tooska ah. Iftiiminta xad-dhaafka ahi waxay keentaa caleenta caleemaha, taas oo si weyn u yaraynaysa soo jiidashada syngonium.
Syngonium ma aha oo kaliya qurxinta qosolka ah ee gurigaaga, laakiin sidoo kale wuxuu keenaa faa'iidooyin gaar ah. Warshadani waxay guriga ku buuxisaa tamar wanaagsan waxayna dadka ka dhigeysaa inay ku koraan oo ay isbeddelaan.
Burcadda ubaxa waxay sheegeysaa in nooca caanuhu yahay mid wax ku ool ah inuu guriga ku haysto dadka loogu talagalay kakanaanta. Liana waxay u ekaataa dadka raba inay jecel yahiin in ay balaariyaan qadiyadaha, waxay gacan ka geystaan ​​abuuritaanka dabeecad adag iyo kalsooni.
Laga soo bilaabo daaweynta aragtida, cinjirta aan laguma dhejin waxyaabo kasta oo bogsoon leh, laakiin waxaa la ogaadey in joogitaankeeda guriga uu leeyahay saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan waxqabadka xubnaha jirka ee dheef-shiidka.
Waxyeellada geedkaan waxaa ku jira sunta sunta, laakiin haddii aad qaadato taxaddarrada lagama maarmaanka ah markaad taabato, markaa waxad haysanaysaa inaad cabsato.
MUHIIM! Haddii cabitaanka jooniska ee maqaarku ku dhaco maqaarka, isla markiiba biyo raaci biyo badan.
Cayayaanka ugu caansan ee syngonium waa:
Joogitaankeeda waxaa lagu muujiyaa hurdi, isku dhejin iyo ka tagid caleemo. Waxaad ka takhalusi kartaa cayayaankan adigoo ku buufinaya dhirta "Aktellikom". Waxyaabaha loo baahan yahay waa laba jeer.
Thrips. Waxay u muuqdaan sababtoo ah qoyaan la'aan iyo heerkul aad u sarreeya. Dhinaca dhinaca gudaha ee caleemaha, wuxuu tuurayaa deegaanno, taas oo keenaysa dhalaalid iyo caato ah oo aan cagaha lahayn. Daaweynta waa in lagu sameeyaa sunta cayayaanka.
Shchitovki. Calaamadaha joogitaankooda waxaa lagu magacaabi karaa dayrta caleemaha canabkiinna oo joojiya koritaankooda. Markuu arkay calaamadahaas, daaweeyo dhirta "Aktely"
Maxaa dhacaya haddii caleemuhu huruud noqdaan?
Maxay caleemaha u noqdaan huruud (yellow) at Syngonium? Jawaabta su'aashan waa mid aad u fudud: caleenka Syngonium wuxuu isu beddelaa jaalaha iyada oo aan la'aanta qoyaanka hawada. Si loo saxo xaaladdan, inta badan ku buufin warshadda biyo. Intaa waxaa dheer, midabka jaalle ah ee caleemaha wuxuu noqon karaa calaamad ah tiro aan ku filneyn bacriminta carrada. Xaaladdan, waa inaad si deg-deg ah u quudisaa.
Syngonium ma aha warshad balaadhan, laakiin haddii aad rabto inay kuu suurtogasho inta aad suurtagal tahay, raac xeerarka daryeesha.